Koronaavaayiras: 'Itoophiyaan talaalliin yeroo argamuutti akkamiin akka daftee argachuu dandeessu mirkaneeffachuu qabdi'- Dr. Iyyoob G/Masqal - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayiras: 'Itoophiyaan talaalliin yeroo argamuutti akkamiin akka daftee argachuu dandeessu mirkaneeffachuu qabdi'- Dr. Iyyoob G/Masqal
Madda suuraa, DR. IYYOOB G/MASQAL
Itoophiyaan talaallii argachuuf yaalii gootu cimsuu akka qabdu gorfame
Amma yoonaatti koronaavaayirasii ilaalchisee saayintistoonni gaaffilee kanneen akka dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu (immunity) irratti deebii argachuuf hirriba malee bulaa jiru.
UK Hoospitaala Kuwiinsitti kutaa immarjansii kan hojjatan Dr. Iyyoob G/Masqaliif gaaffilee tibba koroonaavaayiras kanaafi erga weerarri kun darbee booda wantoota ta’an irratti xiyyeeffatan isaaniif dhiyeessinee jirra.
Vaayirasichi akkamiin qaama keenya miidha?
Vaayirasichi karaalee gurguddoo afuriin tamsa’a. Namni qabame yoo qufa’u, haxxiffatu, fi harganu vaayirasichi qilleensarra turuun nama biraatti darba. Wal-tuttuqqaa namootaa fi wantoota namni qabame sun tuqe tuttuquun dhibee sanaaf nama saaxila.
Akka Dr. Iyyoobitti, fincaan, dhiigaafi boolii keessa vaayirasichi akka jiraatu beekamus karaalee kanaan akka daddarbu qorattoonni ammallee deebii hin arganne.
Vaayirasichi yeroo hagamiif meeshaaleerra turuu danda’a?
Vaayirasichi kan miidhu qaama hargansuu keenya dha. Nyaata waliin garaacha yoo seenellee, vaayirasichi haphii waan ta’eef asiidiin achi keessa jiru ni bulbulaan jedhu dooktarichi.
Meeshaalee garagaraa irra hagam akka turu garuu ammas qoratamaa jira.
Qoricha koronaavaayirasii hakiimotaan dinqisiifannaa argachaa jiru
Akka Dr. Iyyoobitti, waggota 18 dura ka’ee kan ture Sars irratti hundaa’uun qorannoowwan taasifaman akka mul’isanitti, kooroonaavaayiras pilaastikaafi sibiilarra sa’aatii 72 (guyyoota sadii) turuu danda’a. Naahaasii irratti sa’aatii afur, kaartooniirra sa’aatii 24, mastaawotii, mukaafi waraqaarra guyyoota afur turuu akka danda’u dubbatu.
Yoo qufaanuufi haxxiffannu qilleensarra sa’aatii sadif turuu danda’a jedhu.
Gosti nyaataa gorfamu jiraa? Gosoota dhiigaa tokko tokko caalaatti miidha kan jedhamoo?
Gosti nyaataa addatti vaayirasii kanaf gorfamu jiraachuu baatus, nyaanni madaalawaa humna ittisa dhukkubaa dabalu yeroo hunda barbaachisaa ta’uu ogeessi kutaa immarjansii Dr. Iyyoob ni dubbatu.
Akka dhukkubichaan hin qabamneef walirraa hiiquufi harka daddafanii dhiqachuun akkuma jirutti, warri mallattoo dhukkubichaa argan dafanii adda of baasuu qabu jedhu.
Warreen dhukkuba sukkaaraafi dhiibbaa dhiigaa qaban qoricha isaanii haalaan fudhachuu baannaan vaayirasicha ofirraa dhorkuuf humna hin qabaatani.
Namoonni bakka namni itti heddumaatu hojjatan kan akka daldaltootaafi konkolaachiftoonni akkasumas naannolee gabaafi manneen amantaatti namoonni deeman ammoo maaskii fuulaa akka kaawwatan gorsu.
Covid-19 Chaayinaarraa yoo ka’u namoota umuriin isaanii gurguddoofi dhukkuba qaban qofa akka miidhutti yaadamaa ture. Amma garuu dargaggootaafi dhukkuba kan hin qabnellee miidhuun isaa yaddessaa godheera.
Dhugumatti garuu warreen umuriin raagan humni qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisu laafaa waan ta’eef, dhukkubichaaf caalaatti saaxilamoo dha.
Dhukkubicharraa dandamachuu jechuun maal jechuudha?
Namoonni dhibee kanarraa fayyan irra deebiin qabamumoo humna ittisaa horatu kan jedhu qoratamaa jira.
Akka qorannoowwan kana duraatti, namni vaayirasiiwwan irraa dandamatan yeroo gabaabaaf vaayirasii sanaan akka hin qabamneef humna ittisaa ni horatu. Yeroo dheeraaf garuu ta’uu hin danda’u.
Fakkeenyaaf namni qufaan ganna tokko isa qabe, waggaa sanatti vaayirasii wal-fakkaatuun deebi’ee qabamuu hafuu mala. Sababni isaas vaayirasiin qufaa bara kana ka’u wal-fakkaataa waan ta’eef.
Bara itti aanutti garuu, vaayirasii haaraatu ka’a waan ta’eef dhukkuba sanaan qabamuu irraa hin oolu. Koroonaavaayirasis akkasidhamoo kanjedhu baruuf qoratamaa jira.
Ogeeyyin fayyaa Hospitaala Mandii 15 sababa Covid-19n adda of baasan
Qorattoonnis kanaaf talaallii argachuuf yaalaa jiru. Talaalliin qaamni keenya yeroo hunda qophaa’ee akka eegu taasi waan ta’eef.
Koroonaavaayirasiin ni badaa?
Vaayirasiin kun addunyaarraa ni bada moo akkuma haala jireenya keenyaa jijjiire kanatti nu waliin tura? Gaaffi jedhuuf Dr. Iyyoob vaayirasoota biro irratti hundaa’uun deebii yoo laatan:
Vaayirasiin tokko erga namootarraa namootatti darbuu eegalee booda hin badu. Namoonni dandeettii ittisuu waan horataniif garuu miidhaa jalqaba geessisu hin geessisu. Vaayirasiin kunis kanarraa adda hin ta’u.
Yeroo muraasaan booda miidhaa amma nurraan ga’aa jiru qaqqabsiisuu hafee ittiin wal-barree jiraanna. Haata’u malee saayintistoonni talaallii argachuuf dhama’uu isaanii hin dhiisan jedhu.
Waggoota 20 darban keessattis gosoonni koroonaavaayiras sadii tamsa’anii kan turaniifi dhibeewwan dhala namaa qoran hedduun falli argameefii jira waan ta’eef kunis asirra hin darbu jedhani Dr. Iyyoob.
Qorattoonni talaallii argachuuf dhiyaataniiruu?
Talaallii argachuuf waggoota 15 ga’uu mala, amma yoonaatti dafee talaallii kan argate Iiboolaa yoo ta’u, innis wagga shan fudhate. Kan Covid-19 garuu vaayirasiiwwan koroonaa tokkoo fi lama irratti qorannoon waggoota dheeraaf geggeeffamaa waan tureef, yeroo baay’ee fudhata jedhee hin yaadu jedhaniiru.
Dr. Iyyoob HIV fakkeenya godhachuun yoo dubbatan, yeroo sanatti namni hedduun lubbuusaa yoo dhabu qorichi jira ture. Garuu Afriikaaf kennamuuf yeroo dheeraa fudhate, sun akka hin taaneef biyyoonni akka Itoophiyaa yoo talaalliin vaayirasii amma jiruuf argamu dafanii saammachuu qabu jedhu.
Itoophiyaafi abdii talaallii
Itoophiyaa dabalatee biyyoonni hedduun talaallii koroonaavayiras argachuuf dhama’aa jiru. Yaaliiwwan gulantaa garagaraas taasisaa argamu.
Dr. Tewoodroos Adihaanoomiin kan hogganamu dhaabbanni fayyaa addunyaas hojimaata biyyoota talaallii argachuuf yaalaa jiran walitti fidu ‘Solidarity Trial’ jedhamu qaba.
Biyyoota 70 ol hirmaachisaa kan jiru yaalii kana keessatti lammiileen Itoophiyaa: Piroof. Xaasaw W/Hannaa pirezidentii Yun. Finfinnee, Piroof. Ababaaw Bafiqaaduu Yun. Finfinnee fi Piroof. Ashannaafii Taazzabaw Yun. Goondar irraa hirmaachaa jiraachuun abdii itti hora.
'Koronaavaayirasiin daldaa alergii keenya nuuf guddiseera'- MM Abiy
‘‘Sagaleen keenya akka dhaga’amu gochuun talaalliin yoo argame dafee akka nuuf kennamu taasisuurra darbee, yaalii Itoophiyaan talaallii argachuuf taasiftuuf jajjabina ta’a’’ jedhu Dr. Iyyoob.
Of-eeggannoo poolisii jalqabaa godhachuun humna qabduun weerara kana to’achuurratti xiyyeeffachuu qabdi kan jedhan dooktarichi, talaalliin yoo argamuu daftee fayyadamtuu ta’uuf haala ishee dandeessisus cimsuu akka qabdu himu.
Maloota aadaa saayinsiin deeggaruudhaani talaalliin akka argamu yaalii taasiftus cimsitee itti fuufuu akka qabdu ogeessi Hoospitaal Kuwiinsi keessa dalagan kun kan dubbatan.
KALLATTIIN: Odeeffannoo kallattii - lakkoofsa Covid-19 addunyaarratti
Koronaavaayiras: Remdesiiver qoricha Covid-19 hakiimonni dinqisiifataa jiran
Koroaavaayirasii: Ogeeyyin fayyaa Hospitaala Mandii 15 sababa Covid-19n adda of baasan
Itoophiyaa: 'Koronaavaayirasiin daldaa alergii keenya nuuf guddiseera'''- MM Abiy
8 Waxabajjii 2020
Kadhaa Dirqamaa: Daddabarsa daa'immanii Taanzaaniyaa
Ajjeechaan murtii seeraa malee maal? Namni mirga lubbuun jiraachu kan dhabu yoomi?